Amụma nzuzo - InstaZOOM
Mbido » Data Protection Policy
Anyị ji nzuzo gị kpọrọ ihe. Iji chebe amaghị aha gị, anyị ga-achọ ịgwa gị gbasara omume ozi ịntanetị anyị na nhọrọ ndị ị nwere gbasara mkpokọta na ojiji nke data gị. Anyị na-eme ka ọkwa a dị na webụsaịtị anyị yana n'ebe niile enwere ike ịrịọ data nkeonwe ka ọ dị mfe ịchọta.
Kuki Google Adsense na DoubleClick DART
Webụsaịtị a na-eji kuki sitere na Google, onye na-eweta mgbasa ozi ndị ọzọ, iji nye mgbasa ozi. Google na-eji kuki DART ozi mgbasa ozi nye ndị na-eleta webụsaịtị a na webụsaịtị ndị ọzọ na ịntanetị.
Ị nwere ike gbanyụọ ojiji kuki DART site na ịga na adreesị a: http://www.google.com/privacy_ads.html. A na-enyocha mmegharị onye ọrụ site na kuki DART, nke dabere na amụma nzuzo Google.
Sava mgbasa ozi ma ọ bụ netwọk mgbasa ozi na-eji kuki iji nakọta ozi gbasara mmemme ndị ọrụ na webụsaịtị a, dịka ọmụmaatụ. B. Mmadụ ole gara na webụsaịtị gị yana ma ha ahụla mgbasa ozi dị mkpa. Instazoom.mobi enweghị ohere ma ọ bụ jikwaa kuki ndị a, nke ndị ọzọ nwere ike iji.
A na-anakọta ozi nkeonwe.
Ọ bụrụ na ị instazoom.mobi nleta, a na-edekọ adreesị IP nke weebụsaịtị yana ụbọchị na oge ịnweta. A na-eji ozi a naanị iji nyochaa ụkpụrụ, na-elekọta webụsaịtị, soro mmegharị ndị ọrụ na ịnakọta data igwe mmadụ n'ozuzu maka ojiji ime. Nke kachasị mkpa, anaghị ejikọta adreesị IP edekọ na ozi nkeonwe.
Njikọ na webụsaịtị mpụga
Anyị enyela njikọ na webụsaịtị a maka ịdị mma na ntụaka. Ọ bụghị anyị na-ahụ maka iwu nzuzo nke weebụsaịtị ndị a. Ị kwesịrị ịma na iwu nzuzo nke weebụsaịtị ndị a nwere ike ịdị iche na nke anyị.
Enwere ike imelite nkwupụta a n'oge ọ bụla n'uche anyị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iwu nzuzo nke instazoom.mobi biko kpọtụrụ anyị na [email protected]